Enza ngendlela oyifisayo indawo ku-Instagram ▷ ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Yenza ngokwezifiso indawo ku-Instagram
Januwari 29, 2019 0 Comentarios 815
I-Instagram has imisebenzi eyengeziwe nezimpawu, ezisivumela ukuthi sabelane noxhumana nabo indawo esikuyo indawo noma i-geolocation.
Ukusetshenziswa kwayo ezinkundleni zokuxhumana kuyasivumela sazise indawo yethu ngqo ngesikhathi sokwenza incwadi.
Isebenza ngokusebenzisa Ubuchwepheshe be-GPS ikwazi ukuthola izinto noma abantu kumephu ngokusebenzisa uhlelo lokuxhumanisa olunquma indawo, uhlobo lwedivayisi abaxhumeke kuyo nolimi lomsebenzisi.
1 Ungabelana kanjani ngendawo yakho ku-Instagram
1.1 Yabelana ngendawo Izindaba ze-Instagram
2 Faka indawo esithombeni esivele sithunyelwe ku-Instagram
3 Kungani wabelana ngendawo yakho ku-Instagram?
3.1 Yabelana ngendawo lapho ungekho
4 Yenza indawo yakho ngokwezifiso
5 Amaphutha lapho kungezwa indawo
5.1 Ingabe indawo ekuyo inezingozi?
6 Geolocation kanye nokumaketha
Ungabelana kanjani ngendawo yakho ku-Instagram
I-geolocation nayo iyatholakala ukwengeza indawo yakho ku-Instagram nezithombe owabelana ngazo esigabeni sezindaba:
Thinta inketho + enkabeni yebha yamathuluzi ephansi
Khetha isithombe ofuna ukusaba kusuka kugalari yakho noma thatha isithombe noma ividiyo
Faka okokuhlunga nezilungiselelo zokuhlela ozithandayo
Bese uthinta ekhoneni eliphezulu kwesokudla lapho lithi "Okulandelayo"
Bhala igama-ngcazo ngama-hashtag
Yisho abantu abakuphelezela noma ofuna ukukhulumela ngokuqondile lokho kuthunyelwa esigabeni "se-Tag abantu"
Uzothola inkethoFaka indawo" Okokuqala, izindawo eziphakanyisiwe zendawo lapho uzovela khona, khetha eyodwa evumelana kahle
Yabelana ngendawo Izindaba ze-Instagram
Ukwabelana ngendawo ngezindaba, inqubo iyafana:
Khetha isithombe ofuna ukusaba
Qhafaza kumenyu ye-Stickers
Khetha inketho yendawo bese ungeza enye efanelekile
Inqubo nayo iyafana amavidiyo kanye ne-Boomerang.
Faka indawo esithombeni esivele sithunyelwe ku-Instagram
Ukuze ungeze indawo lapho isithombe osuvele usishicilele landela lezi zinyathelo:
Thola isithombe ekudleni kwakho
Chofoza amaphuzu amathathu ekhoneni elingakwesokudla lesithombe
Chofoza okukhethwa kukho “Hlela"
Ngaphansi kwegama lephrofayela yakho uzobona inketho "Faka indawo”Ngokuhlaza okwesibhakabhaka, chofoza kukho
Khetha inketho yendawo efanele
Thinta inketho ekhoneni eliphezulu kwesokudla isheke eliluhlaza okwesibhakabhaka ukuvuselela imininingwane
Kungani wabelana ngendawo yakho ku-Instagram?
Izindaba zenziwa kuya ngokuya kusebenza kanye nezinketho zokwenza ngokwezifiso abasinikeza zona, ngaphezu kokufaka izinketho eziningi zokuhlela zokudala, futhi banethuba lokungeza ama-hashtag nendawo.
Ngakho-ke abalandeli bakho bayakwazi ubuphi. Into enhle ukuthi lezi zindaba ze-geo ezitholakala kukunika ukubonakala okukhulu nokuphambili kunjini yokusesha.
Sizokuvumela ukuxhumana nabanye abasebenzisi okuyindawo futhi ukuheha abathengi abangabakhona esimweni sokuthi usebenzisa i-Instagram njengengxenye yezindlela zokuthuthukisa imikhiqizo noma izinsiza.
Uma i-akhawunti yakho ingeyakho, nokwabelana ngendawo yakho kuzokuvumela ukuthi ubhale izinkambo zakho kanye nemizila oyithatha ekuhambeni kwakho kwamaholide noma ngempelasonto futhi uyikhombise abangani bakho.
Yabelana ngendawo lapho ungekho
Mhlawumbe uyazibuza ukuthi kungenzeka yini ukhozi Instagram futhi abalandeli bakho bathumela ukuthi usezindaweni ezihehayo uma ubukele i-TV ngempela ekhaya.
Esigabeni esithi "Faka indawo" ungabeka noma yiliphi igama bese ukhetha Ngabe ufuna ukuba kuphi?
Uma kwenzeka ukwimodi ye-incognito kwenye indawo futhi ufuna ukukholwa kulabo abakulandelayo ukuthi ukwenye indawo, izindaba kanye neposi lapho zitholakala zingakunikeza "i-alibi".
Yenza indawo yakho ngokwezifiso
Ukwenza ngokwezifiso indawo yakho ku-Instagram kuthanda kuzoletha ukubonakala kumkhiqizo wakho futhi wandise ithrafikhi ku-akhawunti yakho. Kuzokwenza kube lula kuwe ukudala umphakathi ezizungeze iphrofayela yakho.
Uma uqaphela ukuthi i-Instagram ayitholi indawo yakho noma uma kunokuba ubeke indawo lapho ufuna iwebhusayithi yakho noma iwebhusayithi yenkampani yakho ivele, kufanele ulungiselele kusuka ku-Facebook:
Yenza isibuyekezo sesimo noma wabelane ngesithombe
Ekhoneni eliphezulu kwesokudla chofoza amachashazi amathathu
Khetha inkethoNgilapha", Beka ikheli lewebhusayithi yakho noma lelo lesitolo sakho noma igama lomkhiqizo wakho, uma lingaveli phakathi kokukhethwa indawo kwendawo kwe-Instagram
Ukuvuselelwa kungathatha isikhashana kepha ekugcineni igama lewebhusayithi yakho noma ikheli olibekele esitolo sakho sezinto ezibonakalayo kufanele libonakale phakathi kweziphakamiso lapho ungeza indawo okuyo okuthunyelwe kuyo ku-Instagram
Amaphutha lapho kungezwa indawo
Abanye abasebenzisi be-Instagram bayizisulu zamaphutha wohlelo futhi kwesinye isikhathi ukwaba isithombe noma i-storie iba ngumsebenzi ongenakwenzeka futhi yehluleka ukwenza inketho yendawo ye-Instagram isebenze. Lokhu kwenza kube nzima kubo ukwengeza indawo lapho bekhona. Phakathi kwezimbangela ezingaba khona:
Ukungayilungisanga kahle indawo yendawo noma le ndlela yenziwe yasebenza kuselula
Ukuxhumana kwehluleka kunethiwekhi yedatha noma kwi-Wi-Fi
Ukuntuleka kokuvalwa kwesiginali komhlinzeki wesevisi yeselula
Isilinganiso sendawo asilungile
Indawo ofuna ukuyihlanganyela ayitholakali noma umbhalo owufakayo unamaphutha esipelingi
Finyelela i-Instagram yakho nge-imeyili. Ngokusobala i-geolocation isebenza kahle kakhulu lapho ufinyelela uhlelo lokusebenza nge-Facebook
Ingabe indawo ekuyo inezingozi?
Ukuvumela bonke abantu abaziwayo nabangaziwa emvelweni yakho ukuthi bazi indawo yakho unomphela kungaba nezingozi. Kukhona labo abancamela ukungagunyazi i-Instagram noma ezinye izinhlelo zokusebenza ukuthola indawo yabo ngezizathu zokuphepha nezemfihlo. Khumbula ukuthi:
Uma uhamba [i-imeyili ivikelwe] Kwenye indawo kude lapho ungazi khona muntu, kungahle kungabi okuphephe kakhulu ukugcina indawo yendawo inikwe amandla. Lolu lwazi luzotholakala kubangani bakho, kodwa nangabafokazi asondele kuwe
Ikakhulu ngesikhathi sokuphumula kanye nokuhlanganyela indawo yakho yendawo ngesikhathi sangempela kuzokwazisa amasela lokho awukho ekhaya
Imininingwane yendawo yakho izokwenza nokuthi utholakale abathengisi amasheya wesikhathi namasu weholide angakuthandi futhi azomane achithe isikhathi sakho futhi asuke ekuhambeni osuvele ukuhlelile
Ungabelana ngendawo kokuthunyelwe kwakho kepha ungakwenzi ngesikhathi sangempela. Yenza le ncwadi “Kuhlanjululwe”Kuzoba ngokuphephile kuwe. Lesi sincomo singaphezu kwakho konke kulabo abasebenzisa i-Instagram.
Inkinga ebucayi kakhulu yile yezingane, okufanele ihlale inketho yendawo kumadivayisi ayo ikhutshaziwe ngezizathu zokuphepha nezokuphepha. ukuvikela kwakho.
Geolocation kanye nokumaketha
@usesaurus Faka indawo yazo zonke izindawo lapho uhamba ngezinyawo.
I-geolocation inezicelo ezihehayo for the marketing digital ngoba ivumela amaklayenti amaningi angaba khona:
Yazi ukuthi ibhizinisi lethu noma isitolo senyama sitholakala kuphi
Nquma ukuthenga endaweni eseduze noma engaphansi ngokusho kwendawo yakho
Thola uhambo lohambo
Yabelana ngendawo yomkhiqizo noma kusetshenzelwa oxhumana nabo
Thola ngemicimbi oyithandayo ezokwenzeka endaweni yakho
Okomkhiqizo nosomabhizinisi, ukwazi indawo okuyo amakhasimende abo angahle futhi ahlanganisiwe kwenza kube lula kuwe ukuthi:
Chaza izingxenye zemakethe ngqo
Ithrafikhi eqondile ezitolo zomzimba
Lendla a insiza enhle kakhulu ngemuva kokuthengisa
Hlangana kangcono nezidingo zezingxenye ezahlukahlukene zemakethe zemikhiqizo yazo nezinsizakalo
Phakamisa umcimbi phakathi kwabalandeli kanye nabasebenzisi abakuleyo ndawo
Dala imikhankaso esebenza kahle yokukhangisa
Hlaziya izitayela nezinkinga zamanje ngokuya ngendawo yokuhlala
Uma usibhekisisa kahle lesi sithombe uzobona izinketho ezimbili zokuma kwendawo. Esimweni sokuqala umsebenzisi @ locaporlamoda.es Iphrofayili kaMaribel Estévez ehlanganyela izithombe zokubukeka nsuku zonke ku-Instagram nayo iyancoma:
Zonke izincwadi zakho zinendawo. Labo abanentshisekelo kokuqukethwe kwayo bangabona shazi ukuthi kukuphi futhi bazi ukuthi kufanele bathintane yini ukuthola ubudlelwano obuhlelekile.
Icala lesibili @barelbrillante. Imenyu yabo ibukeka iyinhle kakhulu futhi okunye kwabo okukhethekile ngama-squid sandwich. Eposini lakho awukwazi ukubona ukuthi likuphi futhi ukuba "isitolo esingokoqobo" kuliqiniso esingathanda ukukwazi.
Ngokubheka incazelo yeposi uzobona lokho indawo ibekwe ku-hashtag. Inketho evumelekile ngoba ungayithola kusesho lwethegi. Ibha iseseMadrid eduze kwesiteshi i-Atocha, kepha uma ungabheki ngokucophelela ngeke uyibone futhi lokhu kungadala ukuthi balahlekelwe ukuthengisa.
Uma ungekho kwi-Intanethi awukho futhi uma usezinkundleni zokuxhumana futhi ungatsheli abalandeli bakho ukuthi bangakutholaphi, ulahlekelwe uhhafu wobumnandi, ukuthengisa okuningi kanye namathuba!Zihlole!
Januwari 29, 2019
Ungayibeka kanjani i-Instagram 2019 yangasese